Waa maxay u-jeedka safarka Guddoomiyaha Baarlamaanka Jabuuti uu ku yimid Muqdishu? – Kalfadhi
Waa maxay u-jeedka safarka Guddoomiyaha Baarlamaanka Jabuuti uu ku yimid Muqdishu?
October 7, 2019 Hassan Istiila
Guddoomiyaha Baarlamaanka Jabuuti Maxamed Cali Xumad iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan iyo xildhibaanno labada gole ee Baarlamaanka ka tirsan ayaa garoonka diyaaraaha Aadan Cadde si diiran ugu soo dhaweeyay.
Booqashada Wafdiga uu hoggaaminayo Guddoomiyaha Baarlamaanka Jabuuti ayaa qaadan doonta dhowr maalmood, waxaana uu kullamo la qaadan doonnaa madaxda ugu sareeysa ee dalka Soomaaliya.
Waa maxay u-jeedka Safarka wafdiga?
Guddoomiye Mursal iyo dhiggiisa Jabuuti Maxamed Cali Xumad oo ay wehliyaan xildhibaanno ayaa waxaa ay u safrayaan isla maanta magaalada Baydhabo ee xarunta KMG ah ee maamulka Koonfur Galbeed, halkaas oo ay si wadajir ah uga qayb galayaan furitaanka kulanka Baarlamaanka Koofur Galbeed.
Dhinaca kale, 9-ka bisha Guddoomiyaha Baarlamaanka Jabuuti, waxaa uu ka qayb geli doona furitaanka Kalfadhiga 6-aad ee Baarlamaanada Federaalka Soomaaliya, waxaana uu ka jeedin doonnaa khudbad, sida xildhibaanno ay u shegeen Kalfadhi.
U-jeedka safarka Guddoomiyaha Baarlamaanka Jabuuti Maxamed Cali Xumad, ayaa waxaa ay ku saleysantahay ka qeyb-galka Kalfadhiyadda Baarlamaanka Federaalka iyo kan maamul-gobolleedka Koonfur-Galbeed Soomaaliya.
Kalfadhiga 6aad ee Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa furmi doonna 9-ka bishan Octoober oo ku began maalinimadda Arbacada ah.
Xoghayaha guud ee golaha shacabka Mudane C/kariim Xaaji Cabdi Buux, ayaa ugu baaqay xildhibaannada Golaha shacabka ee dalka ka maqan in ay dalka dib ugu soo noqdaan ugu dambeyn 7da bisha Oktoobar, diyaarna ay u noqdaan xil-gudashada uga began Kalfadhiga 6aad ee Golaha Shacabka.
Xisbiga Himilo Qaran oo sheegay in dacwad ka dhan ah Xukuumadda ay u gudbiyeen Maxkamadda sare
Guddiga KMG ah ee sharciga Doorashooyinka oo la kulmay Xildhibaanno iyo Odayaal kasoo jeedo Goboladda Waqooyi